Okumele ukwazi ngamapayipi athutha indle | River Walks
← Mayday for Rivers 2013 Action – Howick
More Mining →
Okumele ukwazi ngamapayipi athutha indle
Posted on July 16, 2013	by Nikki Brighton
Written by Penelope Malinga
What you should know about Water-borne Sewerage Systems
Umphakathi waseMpophomeni unenhlanhla yokuba indawo enemifundlana emithathu ephakela iMidmar dam ekunguyo ephakela amanzi kubantu kusukela emafakatini kuze kufike eHilcrest. Kungiphatha kabi njengelunga lomphakathi ukubona amanzi ethu egcwele indle ephuma ezitamukokweni eziqhumile ngenxa yobudedengu kwethu.
Ngibona kwaba yi phutha elimbi kakhulu ngesikhathi indlu emnyama inikwa izindlu zangasese ezihambiswa ngamanzi ukuthi ayikutholanga ukufundiseka kabanzi ukuthi zisebenziswa kanjani. Bese kuphele isikhathi eside kade sisebenzise izindlu zangasese eziyimigodi lapho ubungafaka isikhumba senkomo, izidwedwe enzindala, izinwele, kanye namaphephandaba nokunye.
Nakhu odinga ukwazi ngamapayipi athwala amanzi esiwasebenzisa ezindlini zethu nokuthi ungasiza kanjani ukugcina amapayipi endle kanye nezitamukoko ukuba zingavaleki futhi sigcine indawo yangakithi inhlanzekile.
Yini ebangela ukuvuza kwesitamkoko kanye nokuvaleka kwamapayipi endle?
Uphenyo olwenziwe emphakathini luveze ukuthi abantu bafaka izinto eziqinile esitamukokweni. Uthola amapayiphi evalwe izindwangu noma amaphephandaba okubanga ukuthi amanzi avimbeke angahambi ngokukhululeka epayipini. Ubuye uthole ukudla okusalile, izikhokho kanye namafutha okusuke kugxishe kwidrain thizeni sekuvalile esitamukokweni. Abanye kuyenzeka ukuthi uma bekhulisa imizi yabo, baxhume amapayipi ngendlela engekho emthethweni mese kudaleka izinkinga. Ngesinye isikhathi kuyenzeka izipuni, imimmese, isihlabathi kanye nokunye ukuba kungene emapayipini. Konke lokhu akukuhle ngoba amapayipi awakhandiwe ukumukela nokudlulisa lesizinto, akhelwe ukudlulisa umchamo, indle kanye ne toilet paper kuphela.
Umphakathi uphazamiseka kanjani ngokuvaleka kwezitamukoko?
Kubiza imali eningi ukudlokodla istamukoko futhi akusiwo umsebenzi ongawusheba nesikwa kuye lo-owenzayo. Amathoyilethi kanye nezitamukoko okuvalekile kwandisa amagciwane futhi kube nephunga elibi endaweni. Lawa magciwane atholakala kwindle abizwa nge e- coli okunguwona abanga isifo sohhudo esibizwa ngeCholera. Okubi ukuthi izitamukoko eziningi ziseduze komufula lapho izilwanyana kanye nabantu abahlala eduze kwawo bengeke bakuthole ukuhlala ngokukhululeka eduze komfula onukubezekile ngenxa yezimpukane. Izimpukane zanda kalula nangokushesha endaweni engcolile bese zithwala amagciwane ziwalethe emakhaya ethu.
Singawagcina kanjani amapayipi kanye nezitamukoko zisebenza kahle ngaphandle kokuvaleka?
Kulula kakhulu ukugwema ukuvaleka nokuchichima kwezitamukoko uma singaqikelela ukwenza lokhu okulandelayo: Kudingenga ufake izibi eziqinile kumgqomo wadoti. Ukudla okudala kumbe okusalile kufake kuplasitiki ukubophe mese ukufaka kumgqomo kadoti. Izipuni nemimese akukhishwe emanzini angcolile ngaphambi kokuba achithwe. Amasanitary towels kumbe amapads lawa asebenziswa abantu besimame awafakwa ethoyilethi futhi kukhona imiyalelo ephaketheni lawo ngaphandle ukuthi uwagoqe ngephepha mese uwalahla emgqomeni. Amacondomu nawo, qikelela ukuthi uyigoqa ngephepha mese uyilahla emgqomeni. Amafutha asebenzile kanye namafutha ezimoto kukhona abawaqoqayo edolobheni langakini ukuze ungazilahleli wena ngokwakho. Okokugcina: uma ngabe udinga ukuxhunyela amapayipi amasha athwala indle noma kunesitamukoko esivuzayo esikuxakayo ngakini, thintana Nomyango wakwa Umgungundlovu District municipality kucingo lamahhala 0800 864 911.
This entry was posted in Uncategorized and tagged sewerage. Bookmark the permalink.
One Response to Okumele ukwazi ngamapayipi athutha indle
Uyasiza futhi SisPenelope. Siyabonga kakhulu.